कसरी पास गर्ने लोक सेवा आयोगको परीक्षा ?
१८७७ पटक पढिएको
धेरै मध्यमवर्गीय नेपाली युवाको सपना हुन्छ– लोकसेवामा नाम निकालेर सरकारी जागिर खाने । नेपालमा निजामती सेवाको बढ्दो आकर्षणसँगै लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा झन्–झन् कठिन हुँदै गएको छ । सेवा प्रवेशका लागि योग्य बन्न हजारौँ युवायुवती ट्युसन, कोचिङलगायत स्वअध्ययनसहित मिहिनेत गरिरहेका छन् ।
तर, लोकसेवामा नाम निकाल्न सानोतिनो तपस्या नै गर्नुपर्छ भन्छन् भुक्तभोगीहरू । नियमित अध्ययन, सफा अक्षर र ओजपूर्ण शब्द चयन, निरन्तरको मिहिनेतका साथमा धैर्य र आत्मबल पनि चाहिने उनीहरूको धारणा छ । लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीका लागि उपयोगी हुने गरी हामीले २०६९ सालको सहसचिवको परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भएका किरणराज शर्माको लोकसेवाको प्रवेश अनुभव र टिप्स समावेश गरेका छौँ :
२०४५ वैशाखमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक पदमा नाम निकालेँ । त्यहाँ दुई वर्ष काम गरेपछि म नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायककै रूपमा गएँ । त्यतिवेलासम्म मैले प्रथम श्रेणीमा एमबिए उत्तीर्ण गरिसकेको थिएँ । त्यसपछि भने मलाई निजामती सेवामा नै प्रवेश गर्ने इच्छा पलाएर आयो । ०५१ मा लेखा अधिकृतको परीक्षा दिएँ, उत्तीर्ण भएँ ।
पूर्वमुख्यसचिव तथा सचिवहरूसँग छलफल गरी आवश्यक ‘फिडब्याक’ लिन्थेँ । केही नयाँ विषय पाउनासाथ टिपोट गरिहाल्थेँ । नोट बनाउनुभन्दा पनि कोर्ससँग सम्बन्धित हरेक विषय अध्ययन गर्ने क्रममा टिपोट गर्थेँ । टिपोट गरेका विषयलाई स्मरण गर्ने, पढ्ने र अभ्यास गर्थेँ । हरेक कोर्सको बारेमा आफैं अवधारणा बनाउँथेँ र विश्लेषण गर्थेँ ।
मैले सकेसम्म इमानदारितापूर्वक काम गरिरहेको छु । काम ठग्न हुँदैन भन्ने लाग्छ । यो सेवाक्षेत्रमा काम गर्न सके आत्मसन्तुष्टि हुन्छ । असाधारण बिदा, वैदेशिक भ्रमणलगायतका अवसर छन् । यद्यपि, निजामती सेवाभित्र केही विकृति पनि छन् । सेवाभाव, पद्धतिबद्ध सोच र निष्पक्ष भावनामा केही कमी आएको देखिन्छ ।
आमूल सुधारको आवश्यकता बढेर गएको छ ।
सफलताका लागि टिप्स:-
१. अध्ययन सामग्रीको खोजबिन गर्ने,
२. पाठ्यक्रमअनुरूप र सोसँग सम्बन्धित अध्ययन सामग्री जुटाउने,
३. राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, विभिन्न संसदीय समितिका प्रतिवेदन, प्रशासन सुधारका प्रतिवेदन संकलन गरी अध्ययन गर्न थाल्ने,
४. बिबिसी नेपाली सेवालगायतका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समाचार च्यानल सुन्ने, हेर्ने । महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमको टिपोट गर्ने ।
५. सम्बन्धित विषयका विद्वानहरूको लेख तथा अन्तर्वार्ता पढ्ने, टिपोट गर्ने,
६. अगाडिका परीक्षामा उत्तीर्ण भएकासँग छलफल गर्ने ।
७. परीक्षा हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अघिदेखि नियमित तयारी गर्ने,
८. पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित सम्बन्धित विषयको टिपोट गर्ने,
९. इन्टरनेटमा पाठ्यक्रमअनुसारको विषयको अध्ययन गर्ने, टिपोट गर्ने ।
१०. पाठ्यक्रमअनुसारको नोटकापी बनाएर अलग–अलग विषय संग्रह गर्ने बानी बसाल्ने,
११. उत्प्रेरित हुने, मनोबल कम गराउने गरी नसोच्ने, सकारात्मक सोच राख्ने,
१२. बिहान दुई घन्टा (४–६ बजेसम्म) दिनहुँ पढ्ने । त्यस्तै साँझ पनि दुई घन्टा पढ्ने ।
१३. एक घन्टा दैनिक रूपमा पढेका कुराहरू लेख्ने र सम्झन कोसिस गर्ने,
१४. कुर्सीमा बसेर टेबुलमा पढ्ने बानी बसाल्ने,
१५. एकाग्रताको विकास गर्ने,
१६. पढ्दाखेरि प्रत्येक एक घन्टामा १० मिनेटजति ब्रेक लिने
१७. दैनिक पढ्दा एउटै विषय मात्रै नपढी २–३ वटा क्षेत्र तथा विषय पढ्ने,
१८. ऐनामा हेरी विश्लेषण गर्ने बानी बसाल्ने,
१९. ठूलो नोट, मझौला नोट र संक्षिप्त नोट बनाउने,
२०. लेख्दै पढ्ने,
२१. मिल्ने, खुल्ने र जान्ने साथीसँग सहकार्य गर्ने
२२. शुद्द र राम्रा अक्षरमा छोटो वाक्यमा लेख्ने,
२३. अवधारणा, सिद्धान्त, अभ्यासजस्ता विषयमा जानकारी राख्ने,
२४. प्रश्नले सोधेको मात्र उत्तर राख्ने,
२५. सम्बन्धित विषयवस्तुप्रति निश्चित अवधारणा राख्ने,
२६. दैनिक शान्त जीवन, निश्चित आम्दानीबाट चल्ने प्रबन्ध गर्ने,
२७. मैत्रीपूर्ण र हर्षपूर्ण पारिवारिक वातावरण बनाउने,
२८. सीप सिक्ने चाँजोपाँजो मिलाउने,
२९. धैर्य राख्ने, निरन्तर लगाब राख्ने,
३०. आत्मविश्वास कायम गर्ने,
३१. स्मरण शक्तिलाई तेज बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
३२. लेख्दा तथा अन्तर्वार्ता दिँदा ओजपूर्ण शब्दचयन गर्ने,
३३. समसामयिक उदाहरणसहित सटीक जवाफ दिने,
३४. मस्तसँग निदाउने बानी बसाई फ्रेस हुन प्रयास गर्ने ।
अन्तर्वार्ता फेस गर्दा के गर्ने?
१. अन्तर्वार्तामा पेस हुँदा मिलेको ड्रेस लगाई भलाद्मी र चम्किलो अनुहारसहित पेस हुने, निरन्तर आई कन्ट्याक्ट गर्ने,
२. शिष्टतापूर्वक जवाफ दिने,
३. विश्लेषणयुक्त पुष्टि र एकरूपतालाई ध्यान दिने,
४. अवस्था र परिस्थितिअनुसार जवाफ दिने,
५. प्रश्नलाई आफूले जानेको क्षेत्रमा लैजान प्रयत्न गर्ने,
६. जानकारी भए पनि व्याख्यात्मकभन्दा छोटो, पुग्ने र सकारात्मक दिशातर्फ मोड्ने,
७. अन्तर्वार्ता फेस गर्दा हात नहल्लाउने, खुट्टा नहल्लाउने र प्रस्टसँग बोल्ने,
८. मध्यम आवाज र सिर्जनात्मक उत्तर दिने र
९. नआत्तिने, शान्तपूर्वक स्पष्ट जवाफ दिन प्रयत्न गर्ने ।